SOMALILAND MAXAA XARIIR KA DHIGAY SOMALIYANA XUMBADII DOOBIGU DAADSHAY. | Toggaherer's Weblog
DAD KA GANACSANAYEY QAAD OO LAGU XIDHXIDHAY EDMENTON EE DULEEDKA CANADA!!!
SOMALILAND MAXAA XARIIR KA DHIGAY SOMALIYANA XUMBADII DOOBIGU DAADSHAY.
Somaliland waxa Eebe siiyey dad leh afar arimood oo nolosha ilbaxnimada adamiga laf dhabar u ah.
1. Aqoon ( knowledge), eraygan oo somalidu guud ahaan khalad u fahantay. Mecnaha eraygu waa garasho dhab ah ( true understanding).
2. Anshax (behaviour)
3. Ujeedo midaysan (unity of purpose)
4. Wax qabad midaysan (unity of effort)
Isweydiintu waxa weeyi cida leh afartaa qodob ee kor kudhigan. Jawaabtu waxa weeyi Guurtida inta aan gelin dugsiyada (school-ka). Markii uu isticmarku dhulkeen haystay waxa beelaha u talin jiray dad wax garad ah. Isticmarkana waxa u shaqayn jiray dad uu wax baray oo xirfad leh, oo dadkeenii hore ugu yeedhi jirayeen Qaban oo ah adeege/to. Dadkaasi haddii ay talo la yimaadan, waligood mid wax tarta lamay iman jirin. Marka la dhagaysto waxa dadku odhan jiray ‘ilayn waxa qaban waa qaban.’
Ujeedada haddii aan u dhaadhaco, waxa weeyi Somaliland arinkan doorashada wax ka dhib badan baa ina soo maray. Marka waa in dadkii tali jiray hawshan lagu celiyaa. Sandkii tagey, markii dorshadii dib u dhacday, ee xiligii madaxweynuhu xilka hayn lahaana dhamaaday. Waxa dadka Somaliland u cadaatay in siyaasiyiinta mucarad iyo muxafidba ay garashadoodu aad u xadidan tahay, markay kala saariwayeen, waxa uu Xeerka dasturku dhigayo iyo waxa Xaqiiqda jirta dhigayso.
Siyasiyiintenu dhamaan waa dad aad xirfad u leh oo school iyo jamacado ka soo baxay, oo tayda xirfadooduna aad u sarayso. Markaa maxaa keenay, in marka arin adag yimaado in qawsaradii aynu kala dooran lahayn ay ka dhabaqdo, oo uu ku dhaco weyrax (manic- depressive psychosis), oo la moodo in ay ka muuqato waxa ay culimadeeni cilmi nafsigu odhan jirtay dabeecad bakhti kud (necrophilic behaviour, sida Xamar ku can baxday).
Haddii aynu ka jawabno weydiintaas, dadkeenii hore waxay odhan jireen, ‘ Nicmo waliba nusqaanteeda ayey leedahay’. Waxbarashada iyo xirfada sare ee siyaasiyiinteenu leedahay, dhib weyna wey leedahay. Ma aha wax iyaga u gaar ah , ee waa habka ay u qorasheyeen waxabarashada nimankii sameeyey, si aanu qofku u xoroobin , loona saadalin karo talabada uu qaadi karo.
Halkaa haddii aynu iska dhigno caadifada (emotional) oo dhan, oo u fiirasano hadalka siyaasiga waxa inoo soo baxaya xaaladahan soo socda ;
1. Maqane-jooga (absentminded ; absorption in thought so as to be largely unaware of surrounding conditions).
2. Lab-lakac (autistic thinking; mental activity which is controlled by the wishes of the individual, as contrasted with reality thinking, more or less wishful thinking or phantasy).
3. Maan-gaab ama makas ( impossible to achieve a critical awareness and submerged in reality).
Waxabarashada school-ka iyo jamacada waxa loogu talo galay in lagu qabano ( adeego), ee uma habaysna in lagu taliyo, haddii aan si kale u idhaa waa qalab gumaysi(an instrument of oppression), ee ma ah qalab gobanimo(an instrument of liberation).
Xaji Cadi Xusen (Eebe raali ha ka noqdo) markii uu booqashada ku tagay Ingiriska waxa uu yidhi ‘ Agoontiini ayaanu nahay ee wax na tara’. Hadalkaa Xaji Cabdi dadka Ingiriska u taliyaa waa garteen, somalidu se may garan. Hadalka Xajigu waxa uu ahaa duurxul(esoteric; intelligible only to those with special knowledge). Dadakenii hore markay qof xun arkaan may odhan jirin, kan yaa dhalay, ee waxay odhan jireen, waxan yaa ababiyey. Marka uu qofku waxbarashadaas aynu sheegnay uu dhamaysto, ma aaminsana in walidkii garasho leeyahay, oo dalkiisu manfac leeyeyhay, dadkisuna sharaf leeyihiin. Waxa uu wax walba u dabo fadhiyaa cidaa leh waxabarashadaa uu ku ababay, oo uu agoontoodii yahay.Xaji Cabdi agoonta uu ka hadleyeyna waa taa.Waana halka uu lahaa Timacade(Eebe ha u naxariisto),‘Isma waafaqan wiil yar iyo waalidkii dhalaye’.
Haddii aad rabtid in aad ogaatid waxa Somaliya ka dhigay xumbadii doobigu daadshay dhegeyso BBC jimcaha, markay Professor iyo Doctor-ku ay doodayan sida ay u yihiin ‘nonsense- garbage in garbage out.
Malin dhawayed waxan dhegestay gudoomiyaha Golaha Dorashada, hadalkiisu aad ayuu u fiicna, waxana ku jiraye eryey qiimo leh. Waxa uu yidhi, ‘Arinkan doorashada fool-eriga halaga daayo ’.Waa dhab, wax walba waa in uu shinkiisa gaadhaa, wax qaydhiin ku fiicana ma jiro. Ereygaa gudoomiyaha ayaa ku filan xalinta jiho-wareerka doorashada
Waxay ila tahay, in arinka doorashada dadkii talin jiray loodaayo, kuwaas oo ah guurtida inta aan school-ka galin, sida Xaji Cabdi Xusen iyo Sh. Axmed Nux(Eebe raali haka noqdee). Waxgarad kani waa dad xaqiiqda ka duula, oo maankooda iyo maskaxdoodu xor tahay, oon caqliga loo sidin sida mutacalimka. Markaa, aynu iska dhaafno sheekada Cambridge iyo Oxford, waxa fiican in aynu waxa ka barano murtidada(wisdom ; experience, knowledge and the power of applying them ) aqoon yahanka weyn ee Muse Cali Farur, taas baa aqoon ah oo nolosheena wax weyn ka badalaysa.